အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် လျှပ်စစ်ကားသစ်တစ်စီး အတွက် Apple နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ Hyundai ! – MyMedia Myanmar
အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် လျှပ်စစ်ကားသစ်တစ်စီး အတွက် Apple နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ Hyundai !
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးနဲ့ အကျော်ကြားဆုံး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Apple က သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းပညာတွေနဲ့ ကားတွေကို ထုတ်လုပ်တော့မယ်လို့ သတင်းတွေ စတင်ထွက်ပေါ် လာချိန်မှာတော့ လူအများစုကို အတော်လေး အာရုံဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကိစ္စကတော့ ထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Apple အ တွက်အတော်လေး ကြီးမားတဲ့ စီမံကိန်း တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ အဆိုအရတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ်ပိုင် လျှပ်စစ်ကား တစ်စီးကို လာမယ့် ၂၀၂၄ မှာအပြီး ဖန်တီးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ တကယ်တော့ အဆိုပါ Apple Car နဲ့ ပက်သက်လို့ သတင်း အမျိုးမျိုးထွက်နေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း အတော်လေးတောင် ကြာမြင့်နေခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုနောက်ဆုံး အဆင့်မြှင့်တင်မှု ၊ နည်းပညာ ပိုင်းတိုးတက် မှုတွေ ဆက်တိုက် ရှိလာတာက အခု Project ကို တော်တော်လေးရှေ့တိုး စေခဲ့တဲ့ သဘောမှာ ရှိနေပါတယ်။
အခုဆိုရင်လည်း နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ သတင်းတစ်ရပ် အနေနဲ့ တောင်ကိုရီးယား ကား ကုမ္ပဏီ Hyundai ဟာ Apple ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Apple Car ဖန်တီးရေးမှာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်လာနိုင်ဖို့ အတွက် ဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေ တယ် ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်တော့ အခု Apple ရဲ့ အစီအစဉ် တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး Hyundai ဘက်ကနေ တွက်ချက် လေ့လာမှုတွေကိုတောင် ပြုလုပ်ပြီးနေပါပြီ လို့ သိထား ရပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Apple အနေနဲ့ ကားတစ်စီးကို ဖန်တီးမယ့် အရေးကြီးတဲ့ စီမံကိန်း တစ်ရပ်မှာ ဈေးကွက်အတွင်းက အခိုင်အမာ ရပ်တည်ထားပြီးသား ကားကုမ္ပဏီ တစ်ခု နဲ့ ပူးပေါင်း ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း ဒါဟာလက်သင့် ခံလို့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်လို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဈေးကွက် အတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ပြီးရှေ့ကိုချီတက်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ မျိုးဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Hyundai ကုမ္ပဏီ ဘက်ကနေ သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး ပြီးသား အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ် ကောင်းတွေအပြင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးသားဂုဏ်သိက္ခာ တွေနဲ့ အတူ ဒီ စီမံကိန်းထဲကို ဝင်ရောက်လာချင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းပညာ တွေ ကလည်း Apple ရဲ့ အဆင့်မြင့်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ အကောင်း ဆုံးပူးပေါင်း ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာ ကိုလည်း သက်သေပြရာလည်း ရောက်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အနာဂါတ်မှာလည်း Hyundai ရဲ့ Brand အခွဲတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Ioniq All-Electiric ကုမ္ပဏီ နဲ့ Apple ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လျှပ်စစ်ကား တို့ဟာ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုပါ မျှဝေ သုံးစွဲလာနိုင်တဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေတာပါ။ Bloomberg သတင်းဌာနရဲ့ အဆိုအရတော့ Hyundai Motor Company ရဲ့ ရှယ်ယာ ပမာဏ ဟာ လက်ရှိမှာ ၂၅ ရာနှုန်း လောက် အထိ တိုးတက် လာနေတာ တွေ့ရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ လောက် အတွင်းမှာ အတိုးတက်ဆုံး အခြေ အနေလည်း ဖြစ်‌လို့ နေပါတယ်။ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ ‌Hyundai အနေနဲ့ ယခင်တုန်း က ကြေညာချက် တစ်ခုထဲမှာ တော့ Apple နဲ့ ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မပါဝင်ခဲ့ဖူးပဲ အဲ့ဒီအစား အခြားသော ကုမ္ပဏီ တွေနဲ့ အတူနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဖို့ အတွက်ကိုပဲ စီစဉ်ခဲ့ဖူးတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကြေညာချက်တစ်ချို့ထဲမှာတော့ သူတို့အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ချင်တဲ့ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ အများ အပြားကိုလည်း ကနဦး လက်ခံ ရရှိခဲ့ပြီး မောင်းသူမဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေ တီ ထွင်ဖို့ အတွက်လည်း ပူးပေါင်းဖို့ ရှိနေတယ် လို့ ဆိုထား ခဲ့ သေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကုမ္ပဏီဘက်ကနေ အခု လိုမျိုး အချိန်ကာလ တစ်ခုအရ စောနေ သေးတဲ့ အတွက် ဆွေးနွေးမှု အချို့သာ ရှိနေသေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်စုံ တစ်ရာကိုလည်း မချမှတ်ရသေးဘူးလို့ ထပ်မံ ရှင်းပြထားပါတယ်။
အခု ကိစ္စမှာတော့ Apple ဘက်ကနေ တစ်စုံ တစ်ရာ မှတ်ချက် ပေးထားတာမျိုး မရှိသေးပေမယ့် နောက်ဆုံး ထွက် ပေါ်လာတဲ့ မှတ်တမ်း တစ်ချို့ အရတော့ Apple ဟာ သူတို့ရဲ့ Project Titan တစ်စိတ် တစ်ပိုင်း အဖြစ် မောင်းသူမဲ့ လျှပ်စစ် ကား ဖန်တီးမှု နဲ့ ပက်သက်ပြီး ဝေးကွာ နေခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ် လောက် အထိရှိပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ တကယ် တမ်းသာ Apple ရဲ့ ကားစီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ Tesla Model Y နဲ့ Model3တို့ က အကောင်းဆုံး ဈေးကွက် ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပြီး Volkswagen ရဲ့ လျှပ်စစ် ကား ကောင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ID.4 တို့လို ကားတွေနဲ့လည်း ကောင်းကောင်းယှဉ်ပြိုင် လာနိုင်တာပါ။ တကယ်တော့ VW ကုမ္ပဏီဘက်ကလည်း မောင်းသူမဲ့ လျှပ်စစ် ကားဈေးကွက် လောကထဲကို Apple ကို ဝင်ရောက် စေချင်နေတာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် တီထွင် ထားတဲ့ ကားနဲ့ကို ‌ဖြစ်လာဖို့ မျှော်လင့် နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မို့လို့ အရေးတကြီး စောင့်ကြည့်ဖို့ ကျန်ရှိ နေတဲ့ တစ်ချက်ကတော့ Hyundai နဲ့ Apple တို့ အကြားက အခုလို ဆွေးနွေးမှုတွေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ တစ်ခုခု အကောင် အထည် ဖော်လာနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
The post အသစ်ထွက်ရှိလာမယ့် လျှပ်စစ်ကားသစ်တစ်စီး အတွက် Apple နဲ့ ဆွေးနွေးနေတဲ့ Hyundai ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-09T16:30:46+06:30January 9th, 2021|MYCARS MYANMAR|